PSG oo ku maqan dhanka Real Madrid, awood lacageedna isticmaaleysa! – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Arbaco, Maarso, 20, 2019 (HNN)- Kooxda Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay diyaarineyso qorshe ay Real Madrid kaga soo qaadaneyso xiddigga khadka dhexe ka ciyaarra ee Toni Kroos marka la gaarro suuqa xagaaga.
Ka dib guuldarradii la yaabka lahayd ee sida lama filaanka ah kaga soo gaartay Manchester United tartanka Champions League-ga wareeggiisa 16-ka, kooxda reer France ayaa ka fikireysa in safkeeda xiddigo cusub ay kusoo darto.
Iyadoo xaal sidaas yahay, waxaa usii dheer PSG inay xagaaga lumineyso Adrien Rabiot, sidaas darteed, waxa ay hadda bartilmaameed ka dhiganeysa kubbad qaabeeyaha qaranka Germany ee Toni Kroos.
PSG waxaa ay la diyaar tahay lacag dhan £68m, sidoo kalena waxa ay sare u qaadeysaa %50 mushaarka uu ka qaato kooxda Real Madrid, sida ay ku warramayaa OK Diario iyo Sport.
Hase ahaatee, kusoo laabashada Real Madrid ee Tababare Zinedine Zidane ayaa waxa ay ka dhignaan doontaa inay adkaan doonto in Kroos laga fara-maroojiyo Los Blancos, maadaama uu qayb muhiim ah ka yahay qorshaha macallinka reer France.
Xiddiggii hore ee Bayern Munich ayaa ka mid ahaa furayaashii Real Madrid ka saaciday inay saddex jeer oo xiriir ah ku guuleysato tartanka Champions League-ga.
Kroos ayaa dhaliyay keliya hal gool 36 ciyaar oo uu garoonka Los Blancos u galay fasal ciyaareedkan, isagoo keliya shan jeer oo qura gool ka caawiyay saaxiibbadii, xilli kooxdiisa ay xilli ciyaareed dhib badan qaadaneyso.
PSG oo ku maqan dhanka Real Madrid, awood lacageedna isticmaaleysa! added by admin on March 20, 2019